”Geeraarkaagu waa gef qaran” – Iiraan oo aad uga carootey maanso uu akhriyey MW Erdogan (Maxay qoonsatay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Geeraarkaagu waa gef qaran” – Iiraan oo aad uga carootey maanso uu...
”Geeraarkaagu waa gef qaran” – Iiraan oo aad uga carootey maanso uu akhriyey MW Erdogan (Maxay qoonsatay?)
(Tehraan) 12 Dis 2020 – Wasiir Dibadeedka Iiraan, ayaa furka ku xooray MW Turkiga kaddib markii uu akhriyey gabay muran dhaliyey, kaasoo ku baaqaya in gobollada Iiraan ka tirsan ee Azerbaijan loo kala qaybiyo dalalka Azerbaijan iyo Iiraan, xilli la xusayey guushii Baku ay kasoo hoysey Armenia.
Mohammad Javad Zarif ayaa Twitter ku canaantay MW Recep Tayyip Erdogan, oo gabayga uu akhrinayey uu sheegayo in gobollada Azerbaijan uu qayb ka yahay Jamhuuriyadda Azerbaijan. Gobollada Azerbaijan waa 3 gobol oo ku yaalla woqooyiga Iiraan.
”MW Erdogan looma sheegin in waxa uu sida xun uga akhriyey BAKU ay sheegayaan in dhulka woqooyiga Aras laga jaro Iiraan. Qofina kama hadli karo Azerbaijan-teenna aan jecel nahay.” ayuu yiri Wasiirka oo sidoo kale qayb kale kusoo afka Faarisiga.
“Waxay kala qaybiyeen Webiga Aras, waxayna ka buuxiyeen dhagxaan iyo biro. La igama jari lahayn ee xoog baa la iiga kaa jaray,” ayaa ka mid ahayd tudcaha gabayga uu akhriyey Erdogan oo Khamiistii dabaaldeg uga qayb galay Baku, iyadoo cidda xoogga ku kala jartay ay tahay Soofiyeetkii oo qaybna isagu qabsaday qaybna Iiraan ku daray.
Dadka Beershiyaanka ah ayaa baraha bulshada ku faaqidayey arrintan iyagoo Erdogan ku tuhmey inuu xambaarsan yahay damacii ”Cusmaaniyiinta oo cusub.”
Previous articleSaxariirta ay shirkadda dhiig-miiradka ah ee SAHAL ku hayso shacabka safraya oo heer cusub gaartey (Arag dhibaatadan)
Next articleMaxkamadda Sare ee Maraykanka oo xukuntay inay MAGDHOW dalban karaan Muslimiinta duullimaadka laga mamnuucay (Soomaali ka faa’iidaysan karta)